ကဗျာ « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
52 comments on “ကဗျာ”
ငှက်ကလေးတွေကမေးတယ်… မင်းမှာ ချစ်သူအများကြီးရှိလားတဲ့… ငါကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်… ချစ်သူအများကြီးမရှိပါဘူး… ဒါပေမယ့်…ရှိတဲ့တစ်ယောက်ကို အများကြီးချစ်ပါတယ်လို့
ချစ်သူလေး ပျော်ရွှင်ပါစေ …………..
နင့်အတွက်တော့ ငါက အေးချမ်းစေမှာပါ ….
ကလင်ကလင် – – –
Hello – – – ချစ်သူ
အင်းလေ ချစ်တတ်ခဲ့မှတော့ လွမ်းတတ်မှာပေါ့လေ…
အလွမ်းဆိုတာ ချစ်ခြင်း၏ တိုင်းတာမှုတစ်ခုလို့ဆိုရင်ရမလား
အမေ ရေ သားလေ အရမ်းလွမ်းတယ်လို့ အော်လိုက်ချင်တယ်ဗျာ…..
ကိုယ်က မင်းပြန်ချစ်မချစ်ပဲ အရေးကြီးနေမိတယ်။
ဘုံစနစ်နဲ့ မင်းကို မျှော်လင့်နေတတ်သူတွေကိုပဲ
ကိုယ်က မင်းကို ချစ်နေမှာပါပဲ
တင်မိုသီ မက်ဗေး ကွယ်လွန်ပြီးလည်း
အီရတ်က အသေခံဗုံးတစ်လုံးလည်း ဖြစ်မယ်
အလင်းမဲ့ ညတွေများလို့ လမ်းမှားမှားနေတာကပဲ ခက်ခဲ။
မင်းကိုတော့ . . . .
သည်းသည်းမည်းမည်း ချစ်နေခဲ့တာ အမှန်။
I LOVE U လို့ခဏခဏသာမပြောတာ နင့်ကိုသေလောက်အောင်ချစ်ပါတယ် I MISS U လို့တွေ့တိုင်းမပြောပေမယ့် နင့်ကို Heart Beat တိုင်းလွမ်းပါတယ် I NEED U လို့ကြုံတိုင်းမပြောပေမယ့် နင့်ကို Second တိုင်းလိုအပ်နေပါတယ်
နင့်အတွက် နင်မသိအောင် တိတ်တိတ်လေးလိမ္မာတယ်…..နင်မသိအောင် တိုးတိုးလေးလွမ်းတယ်……နင်ချစ်လားလို့မေးတိုင်း ကောင်းကောင်းမဖြေခဲ့ပေမယ့်….တိတ်တိတ်လေးချစ်တယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ဖြေခဲ့တယ်
ယှက်နွယ်ခဲ့တာ သံယောဇဉ်တွေပါ မင်းသုံးနေကျ အရက်ပျံမဟုတ်ဘူး စိတ်ထဲမပါပဲ ငါ့ဆီမလာနဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ကုပေးမယ့်သမားတော်လည်းမဟုတ်ဘူး
ငါမင်းကို ချစ်တယ်ဆိုတာ မင်းငါ့အနား အမြဲရှိတာမရှိတာထက် မင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးကို မြတ်နိုးတာပါ….ငါမင်းကို ချစ်တယ်ဆိုတာလေ ပါးစပ်ကပြောတာတွေထက် နှလုံးသားထဲက ပိုပြီး လေးနက်ပါတယ်ဟာ
ခေါင်းစဉ်ရှာ မရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ 
ပေးလိုက်တဲ့စာနဲ့ရလာတဲ့သတင်းတွေက
လမ်းအတူလျှောက် ၊ ဈေးအတူရောက်
တွေ့ ရာလူနဲ့ သာယာနေတတ်တာ
ဒါပေမယ့်လည်း ယောက်ျားသေသွားလို့ 
ဘ၀ကို မာန်မာန အပြည့်နဲ့ ရဲရဲ ရင်ဆိုင် လျှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့
ငါတို့ ဘ၀ကို နေ့ စဉ်သာယာမှုမပေးဘူးလေ
နေ့ စဉ်စာရေး ဖုန်းဆက်မမေးနိုင်ခဲ့တာ
ငါ့ဘ၀ရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ကံပေါ့……………………………..။
ဘယ်ခေါင်းစဉ်တတ်ပြီး ဘာအကြောင်းမှ လာမရေးပြပါနဲ့ ……….။
နင်ကြားဘူးတဲ့ အာဇာနည်သီချင်းလို မဟုတ်ဘူးဟ
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွတ်တယ်ကို ငါမခံစားတတ်တော့
ဒီဘ၀ ဒီမျှနဲ့ ပဲ ရှိပါစေ………………………………..။
ပေးတိုင်လည်း ယူလို့ မရသလို
ပေးတိုင်းလည်း လက်ခံလို့ မရတဲ့ အခြေနေတွေလည်းရှိသေးတယ်………..။
နားလည်မှူရှိဖို့ က အဓိကကျတယ်
အရင်က ငါမှားခဲ့ တယ်ငါ့နှလုံးသားရဲ့ စေညွှန်ရာကို
မချစ်သင့်တဲ့ သူကိုချစ်မိပြီး ချစ်သင့်တဲ့ သူကိုတော့မျက်ကွယ်ပြုမိတယ်………..။
ဝင်ချင်တဲ့ သူဝင် ထွက်ချင်တဲ့ သူထွက် အချိန်တော့
ငါ့ဦးနှောက်ကစဉ်းစားပြီး အားလုံးကို CANCEL လုပ်ပစ်လိုက်တယ်
ဝင်လာသူအားလုံး CANCEL လုပ်ပစ်လိုက်မယ်…………………………….။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မက အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ
ငါလေ ခံနိုင်ရည်တွေ မရှိလို့ ပါ …..
ငါလေမမှားရအောင် ပြင်ပါ့မယ် ……
နင် ငါ့ကို ကျောမခိုင်းလိုက်ပါနဲ့ နော်…..
ဘယ်သူ့ ကိုမှ အစားထိုးလို့ မရခဲ့ ပါဘူး
တိတ်တိတ်လေး အိပ်နေခဲ့ တယ်………..။
တခါခုန်တိုင်း ခက်ထားတဲ့ သော့ချက်တွေပျက်စီးကုန်တယ်
နင်အဖြေပေးခဲ့ တဲ့နေ့လေးရောက်တိုင်း
တချို့ နှစ်တွေဆို ငါ့ရင်ခုန်သံက
ငါ့အသက်ကို တောင်ရန်ရှာစေခဲ့ တယ်
အဓိကသော့ချက် က နင့်ကိုအပိုင်းပေးထားတော့
နင့်ကလွှဲပြီး ဘယ်သူမှ ငါ့နှ လုံးသားတခါးကို ဖွင်မရခဲ့ ဘူး…………..။
နင့်ကို ဘယ်လောက်ထိချစ်မှာလဲလို့ပြောမပြချင်ဘူး
နင်ပါလို့ ပြောပြီးငါ့ရင်ဘက်ထဲက နင့်ကို ပြလိုက်မယ်
တန်းဖိုးဖြတ်လို့ မရအောင်ကို တန်ဖိုးထားပါတယ်
နင်လိုချင်သမျှ ပေးဖို့ အဆင့်သင့်ပါ
ဘယ်အချိန်ထိချစ်နေမှာလဲလို့ မေးဦးမလို့ လား
ငါ့ခန္ဒ္ဒာ မြေကျတဲ့ အထိချစ်နေမှာပါချစ်သူရယ်…………………………။
ဖိုးခွားလေး (ကော့မူးမြို့ )
ငါ့ ရင်ထဲ မြတ်နိုးခြင်းတွေက
ငါ… တိတ်တိတ်လေး ချစ်ခဲ့ခြင်းတွေနဲ့………….။
ချစ်သူလာမယ့် လမ်းမှာ စောင့်မျှော်ရင်း
တမ်းတမှု နေ့စွဲတွေကို အဖြေရှာရင်း
ငါ…. တိတ်တိတ်ကလေး လွမ်းတတ်ခဲ့ ခြင်းတွေနဲ့…………။
နင့် သတင်းတွေ ကြားချိန်တိုင်း
ငါ့ နားတွေ ထိုင်းသွားချင်တယ်………
နင့် အကြောင်းကို တွေးမိရင်
ထာဝရ အတွက် ကန်းသွားချင်တယ်………..။
အရင်ဆုံးဝမ်းနည်းရမှာ ငါပါ ။
မင်းပြန်ချစ်ချိန်တွေ မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ ငါ
အခုတော့လေ…..မင်းပြန်မချစ်ခဲ့တာ ကောင်းပါတယ်လို့ 
ငါတို့ နှစ်ဦးသား သံယောဇဉ်ရဲ့ နှောင်ဖွဲ့ ခြင်းအောက် တမ်းတခြင်းကြုံလာတိုင်း
မင်း ပူဆွေးမိရင် အရင်ဆုံးနာကျင်ရမှာ ငါပါ ။
မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ ချင်တဲ့ ငါ
ဆုံတွေခြင်းနောက် ခွဲခွဲချိန်တွေတိုင်း မင်းမျက်ရည်စတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင်
အရင်ဆုံး ရှိုက်သံတွေက နှလုံးသားဆီမှာ
ပဲ့ တင်ထပ်နေမှာ ငါပါ ။
မပြောင်းလဲ မဟောင်းနွမ်းပဲ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာလေးမှာ
မင်း အပေါ်မှာချစ်ခဲ့တာတွေ သိမ်းဆည်းရင်း
တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကျောခိုင်းပါရစေ….
ငါ့ အတွက် မင်းကိုချစ်ခဲ့ခြင်းက
ငါကိုယ်တိုင် ဝေခွဲမရနိုင်တဲ့ အဖြစ်တွေ နေရှိခဲ့လို့ ပါ ။
အလွမ်းသီချင်းတွေနဲ့လမ်းဘေးထိုင်ပီး သီချင်းဆိုဖို့ လဲမရှိတော့ဘူး
ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မတောက်တခေါက်နဲ့ 
၁၈ နှစ်လောက်မှာ အိမ်ထောင်ကျသွား
အမျှော်အမြင်မရှိ သူယူမိလေပြီတဲ့ ….(နောင်တစကား).
why???? လို့ မေးတော့…………
ရင်သေွးရလို့အဖေဖြစ်
ရှက်စရာလူ့ အလယ်မှာ သူသားကိုကျောင်းထား
ဘယ်သူဆီမှလက်ဖြန့် တောင်းလို့ မရဘူးတဲ့………….
သားအတွက် ခဲတံနဲ့ စာအုပ် အလုပ်လုပ်လို့ သူဝယ်
ကြိုးစားလို့ လှုပ်ရှား တစ်နေ့ လုပ်မှတစ်နေ့ စား
သူ့ မယားကညိုငြင် သူ့ ရင်ခွင်ဟာလောင်ကျွမ်းခဲ့ ပြီ။
ရှေ့ ရေးကိုမျှော်မတွေး ခဏလေးအတွက်သာယာ
ဘာဆိုဘာမှ အစီအစဉ်ချမထား သူ့ သားအတွက်ဘယ်ရင်အေးရမလဲ……
မပြည့်စုံပဲနဲ့ မိန်းမယူ ငါ့သူငယ်ချင်းနည်းတူ
မင်းတို့ မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားလို့ အားထုတ်
ငွေသိန်းရာထုပ်ကို မိဘတစ်ဝက် ကိုယ်တစ်ဝက်နဲ့ 
ရှာဖွေကြိုးစား စီးပွားရမှ မင်းနဲ့ ငါ လက်ထပ်မယ်ချစ်သူ။
ငါ့သူငယ်ချင်းလို အချစ်ကိုရှေ့ တန်းတင်
စာဗူးတောင်းငှက်လောက်မှ တင့်တယ်အောင် အိမ်မဆောက်နိုင်ရင်
မင်းလဲ ငါ့ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင်ဖို့ခွင့်မပြုနိုင်သေးဘူးချစ်သူ….
အလုပ်များစွာနဲ့ကိုယ့်ဘ၀ကို ၂နှစ်လောက်တော့သည်းခံ ပီးစောင့်ပေးဦးနော်
ယုံလို့ မရတဲ့ သူတွေထဲ နင်ကအရှေ့ ဆုံးကဆိုတာငါအစကမသိခဲ့ ဘူး
ငါကလည်းတကယ်ကိုအကန်းကောင် နင်ပြောတာအကုန်ယုံခဲ့ တယ်………။
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ရထဲကမပါတဲ့ 
စကားလုံးတွေနဲ့ နင်နုတ်ဖျားကအကြိမ်၁၀၀ မကပြောခဲ့ တယ်
ငါနင့်ကို ချစ်တယ်လို့ တခွန်းပဲပြောခဲ့ ဖူးတယ်
တသက်လုံးအတွက် အဲဒီတခွန်းတည်းနဲ ပဲနင့်ကိုငါချစ်ပြခဲ့ တယ်……………။
နှလုံးသားမလှတဲ့နင့်ကို ငါအရှုံးပေးပြီးချစ်ခဲ့ တယ်
နင်ငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့နေမြင့်လေအရူးရင်လေ လည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့ 
ဒီကဗျာကို နင်ဖတ်ပြီးရင်တော့ ငါ့ကိုမုန်းလို့ ရပြီ……………..။
မခံနိုင်တဲ့ဒီအသည်းကိုပဲ
စကားလုံးတွေနဲ့နင်ဖဲ့ ဖဲ့ ခြွေတယ်
ယဲ့ ယဲ့ လေးကျန်တော့တာတောင်
နောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကို
သဲ့ သဲ့ လေး ကြားလိုက်သေးတယ် ငါနင့်ကိုမချစ်ဘူးတဲ့ ……….။
ဒီစိတ်နဲ့အိပ်မရတာခဏခဏပါပဲ
အခုကြည့်လေ ဒီကဗျာကို ရေးနေတာ ည ၁၂ နာရီကျော်နေပြီ
အားလုံးအိပ်နေချိ်န်မှာ လွမ်းတဲ့ စိတ်လေးတရေးနိုးလာတယ်
ပြီးတော့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးဖြစ်တယ်
ငါ့စိတ်တွေလေ လွင့် နေတာမဟုတ်ဘူးနော် နင့်ဆီကိုရောက်နေတာ………..။
တစ်လောကလုံးမှာ တစ်ယောက်သောသူကို ရည်ရွယ်တယ်
အနမ်းတွေ ပျိုးချခဲ့တဲ့ နေ့တုန်းက
ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးလည်း လင်းပြလို့ပေ့ါ
ရင်ခုန်သံ တိုးဖွဖွမှာ ချစ်သူရယ်သံက
စည်းချက်သံ တချပ်ချပ် လိုက်တယ်..။
ပြီးတော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အနမ်းတစ်ချို့ရယ်
ပြီးပြည့်စုံခြင်းထက် ပိုမိုပြီး ပြည့်စုံ ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်မှန်တဲ့ ရင်ဘတ်မှာ စူးနစ်ခဲ့ပြီး
နှလုံးသား တစ်ခုလုံးလည်း မိုးရွာချ ထားခံရသလို
စိမ်းလန်းဖူးငုံ တစ်လောကလုံး သာယာတယ်။
ရင်ဘတ် တစ်ခုလုံး ဆေးကြောတဲ့နေ့
ဗီးနပ်စ်တောင် ပါးစပ်အဟောင်း သားနဲ့ပေါ့။
မပျိုးပဲ ရွာချခဲ့တဲ့ မိုး
မငြိုးပဲ ဒဏ်ရာတွေ မပေးပါနဲ့လား
ငါ့ဘ၀ တစ်ခုလုံး မင်းလက်ထဲ အပ်ခဲ့ချင်တယ်။
အတုအယောင်တွေလို့ ထင်လို့ လား…
Deleteနဲ့ Remove listထဲမှာပါနေခဲ့တာလားမသိ..
ဒီရင် အသဲ စွဲမြဲစေကွယ်
သွေဖယ်ခြင်းတို့နိဂုံးချုပ်ကို
လိုချင်တာ အဖြေတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူး …
ဖြေရှင်းချက်တွေ အထင်မခံချင်ဘူး …
ငါ့သမိုင်းထဲက ပျောက်ကွယ်သွားတယ် …
ကြာပါပြီ ..ဒီလိုနဲ့ပဲ …
နေ့ ရက် များစွာ ကြာနေပြီ …..
ကဗျာ ၃ “တကယ်လို့များ … တစ်နေ့မှာ …”
မင်းကို အပြေးလာတွေ့ချင်မိတယ် ……
အသေအချာပဲ မဟုတ်လား …….
အားကိုးတကြီး တောင့်တမိပြန်တယ် ………
အိုမင်းရင့်ရော်ချိန်ကျမှ နားလည်တယ်တဲ့ ..
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှ ပိုသိလာတယ်တဲ့ ..
တိတ်တခိုး ကိုယ့်ကို သတိရနေခဲ့တယ်ဆိုရင်
(မင်းကို) နေ့ရှိသရွေ့ ကိုယ်စောင့်နေမှာပါ …………..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးတယ်...”နင်သူ့ကို အဲဒီ့လောက်တောင် ချစ်တာလား” တဲ့…
ငါတစ်ခွန်းထဲ ပြန်ဖြေလိုက်မိတယ်….”ဟင့်အင်း” လို့
“ဟုတ်တယ်ချစ်သူ…ငါနင့်ကို အဲဒီ့လောက်တောင် ဆိုတာထက် အများကြီးကို ပိုချစ်တာ…..”
ငါ့နှလုံးသားကို ငါ စတေးရဦးမယ်။ ။
ချစ်မိန့် ချစ်သံ ချစ်ရာဇသံများ
လွမ်းတယ်ဆိုတာ .. အခုပြန်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး .. ဟိုတုန်းကအချိန်တွေကိုလွမ်းတာ .. ဆယ်တန်းပြန်ဖြေချင်တာမဟုတ်ဘူး ဆယ်တန်းတုန်းကအချိန်တွေကိုလွမ်းတာ.. အခုပြန်ချစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး.. ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလွမ်းတာ..
ကိုယ်ဟာမင်းကိုလေ မရေရာတဲ့ဘ၀မှာ ဘယ်လိုခေါ်ရက်ပါ့မလဲ နာကျင်စွာတွေးခဲ့ ကံတရားရဲ့လှည့်ကွက်လား လောကကြီးရယ် ငါ့အတွက်တရားရဲ့လား 😦
.ပုံပြောခဲ့လား..ချစ်သူရယ်… စဥ်းစားတိုင်း ငါထိတ်လန့်နေခဲ့.မမြင်နိုင်တဲ့ ငါနောက်ကွယ်မှာ နင်ဘယ်လိုရှိမယ်. ငါမသိခဲ့.. တွေးမိတိုင်းငါ.. ရင်မောတယ်. သတိရသေးလား ကိုယ့်ချစ်သူလေးရယ်.. ညစဉ်တိုင်းငါ.. ငိုမိတယ်.. ဒီမျက်ရည်များစွာ ခမ်းကုန်သွားလိမ့်.. မငိုနိုင်တော့ဘူး. ကြာ၇င် ငါရူးလိမ့်မယ်..
အရေးမစိုက်နဲ့မသိသလိုနေ ဖုန်းမဆက်နဲ့ မလွမ်းသလိုနေ လှည့်မကြည့်နဲ့ ပျော်သလိုနေ ဂရုမစိုက်နဲ့စေလို၇ာစေ But ,don’t forget that I love U
ဒါက မင်လေးရဲ့ (ကိုယ်ပိုင် အရည်အခြင်း)